केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’, किन खौ’रिन कपाल ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’, किन खौ’रिन कपाल ?
नायिका केकी अधिकारी नयाँ लुक्समा देखिएकी छन्। इन्टाग्राम स्टोरी मार्फत उनले आफ्नो कपाल खौ’रिएपछिको नयाँ लुक्स सार्वजनिक गरेकी हुन्। कपाल किन खौ’रिएको बारेमा भने उनले केही बताएकी छैनन् ।०७३ सालको साउन र भदौ महिनामा मण्डला थिएटरमा मञ्चन भएको नाटक ‘बो’क्सीको घर’ को कथामा केकीले फिल्म निर्माण गर्ने भएकी छन्।
फिल्ममा केकी मुख्य भूमिकामा छिन् ।उक्त फिल्मको क्यारेक्टरको लागि कपाल खौ’रिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।हाल उनी यही फिल्मको छायाङ्कनमा व्यस्त छिन् । उनी थुप्रै नेपाली साङ्गीतिक भिडियो, टेलिभिजन विज्ञापन तथा आधा दर्जन बढी नेपाली चलचित्रमा काम गरीसकेकी छिन् ।
म’हिना’वारी भएकाले छुँ’दा कसैलाई दा’ग लाग्यो, ए’लर्जी भयो कि के भयो?’ (भिडिओ)
दिपा श्रीले लेखिन मन छुने स्टाटस महानायक राजेश हमाल लाई कस्तो असर पर्ला हेर्न बाकी छ (भिडियो सहित)